ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်း ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
ကမ္ဘာပေါ်က ပစ္စည်းတွေမှာ အချိန်ကြာလေ ဈေးလျော့လေနဲ့ အချိန်ကြာလေ ဈေးကြီးလေ ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ ပစ္စည်း အမြောက်အများထဲကမှ နာမည်အကြီးဆုံး ၁၀ ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၀. Susse Freres Camera
ဒီရှေးဟောင်းကင်မရာကို ၁၈၃၉ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် လေလံပွဲတစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ ၇၇၅၀၀၀ နဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုထဲသော လက်ကျန် Susse Frères daguerreotype ကင်မရာ ဖြစ်ပြီး သမိုင်းတစ်လျေ၊ှာက် ဂန္တဝင်အကျဆုံး ကင်မရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
၉. Magnetic Floating Bed
ဒီ သံလုိုက် လွင့်မျောနေတဲ့ အိပ်ရာကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အလန်းဆုံး အိပ်ရာဖြစ်တာကတော့ သေချာပါတယ်။ ကြမ်းပြင်က ၁.၃ ပေအမြင့်မှာ လွင့်မျောနေပြီး အလေးချိန် ပေါင် ၂၀၀၀ ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁.၆ သန်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
၈. Wallis Simpson Bracelet
Wallis Simpson ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ စိန်နဲ့ ပြောင်ခေါင်းစိမ်း ရောထားတဲ့ ကျားသစ်ပုံလက်ပါတ်ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် လန်ဒန်လေလံပွဲတစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ ၁၂.၄ သန်း ရခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး လက်ပါတ် ဖြစ်ပြီး ကျက်သရေနဲ့ အလှကလဲ တန်ဖိုးနဲ့ ထပ်တူညီပါတယ်။
၇. Garconala Pipe
၂၀၀၄ ခုနှစ်က Garconala Pipe နာမည်ရှိတဲ့ ပီကာဆိုရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး ပန်းချီကားဟာ နယူးယောက်လေလံပွဲတစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၄.၂ သန်း ရခဲ့ပါတယ်။ ပီကာဆို ၂၄ နှစ်အရွယ် ၁၉၀၅ ခုနှစ်က ရေးဆွဲခဲ့တာပါ။
၆. The Card Players
ပန်းချီဆရာ Paul Cezanne ရဲ့ The Card Players ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် လေလံပွဲတစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ ၂၅၀ သန်းမှ သန်း ၃၀၀ ကြား ရခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်တဲ့သူက ကာတာက တော်ဝင်မျိုးရိုးဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Private Sale အနေနဲ့ ရောင်းခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
၅. Villa La Leopolda
ပြင်သစ်ရဲ့ ဒုတိယ ဈေးအကြီးဆုံးအိမ်ဟာ ဒေါ်လာ ၅၀၆ သန်း တန်ပါတယ်။ ဒီအပန်းဖြေအိမ်ကို ၁၉၂၉ မှ ၁၉၃၂ အတွင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်ခါက Belgium ဘုရင် ပိုင်စိုးခဲ့တဲ့ နယ်မြေမှာ ဆောက်လုပ်ထားတာပါ။
၄. The Perfect Pink
၂၀၁၀ မှာ ရှားပါးတဲ့ ပန်းရောင်စိန်တစ်ပွင့်ဟာ ဟောင်ကောင်မှာ ဒေါ်လာ ၂၃ သန်းနဲ့ အာရှမှာ ဈေးအကြီးဆုံး ရတနာအဖြစ် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ၁၄.၂၃ ကာရက်ရှိတဲ့ The Perfect Pink အမည်ရတဲ့ စိန်ပွင့်ဟာ ဒေါ်လာ ၂၃၁၆၅၉၆၈ နဲ့ လူလေးယောက် အပြိုင်အဆိုင် လေလံဆွဲရင်း အမည်မသိသူတစ်ဦးထံ ပါသွားတာပါ။
၃. The Chopard 201-Carat Watch
ဒီ Chopard လက်ပါတ်နာရီမှာ အသည်းပုံ စိန်ပွင့် သုံးခု ပါပါတယ်။ ပန်းရောင်က ၁၅ ကာရက်၊ အပြာက ၁၂ ကာရက်၊ အဖြူက ၁၁ ကာရက် အသီးသီးရှိပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းနဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
၂. Pink Star ( Diamond )
Pink Star လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးသီးအရွယ် စိန်ဟာ ဂျီနီဗာလေလံပွဲတစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ ၈၃ သန်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ကျောက်မျက်အဖြစ် စံချိန်တင် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပန်းရောင်စိန်ပွင့်ကြီးဖြစ်ပြီး တောင်အာဖရိက ဒီဗီယာ မိုင်းတွင်းတွေကနေ ၁၉၉၉ မှာ ရရှိခဲ့တာပါ။
၁. House: Antillia Mumbai
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးအိမ်ဟာ အတ္တလန်တိတ် ကျွန်း Antillia ကို အစွဲပြုပြီး အမည်ပေးထားတာပါ။ ဒီအိမ်ဟာ ၂၇ ထပ်အိမ် ဖြစ်ပြီး Mumbai တောင်ဘက်ပိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ Reliance Industries ရဲ့ Chairman Mukesh Ambani ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဖြစ်ပြီး အိမ်ဝန်ထမ်း ၆၀၀ ရှိကာ အိန္ဒိယရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံးအိမ်အဖြစ် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀၀ နဲ့ စံချိန်တင်ထားပါတယ်။
ကမ်ဘာပျေါက ပစ်စညျးတှမှော အခြိနျကွာလေ ဈေးလြော့လနေဲ့ အခြိနျကွာလေ ဈေးကွီးလေ ဆိုပွီး နှဈမြိုး ရှိပါတယျ။ ဈေးအရမျးကွီးတဲ့ ပစ်စညျး အမွောကျအမြားထဲကမှ နာမညျအကွီးဆုံး ၁၀ ခုကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီရှေးဟောငျးကငျမရာကို ၁၈၃၉ ခုနှဈက ထုတျလုပျခဲ့ပွီး ၂၀၀၇ ခုနှဈ လလေံပှဲတဈခုမှာ ဒျေါလာ ၇၇၅၀၀၀ နဲ့ ရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။ တဈခုထဲသော လကျကနျြ Susse Frères daguerreotype ကငျမရာ ဖွဈပွီး သမိုငျးတဈလြေ၊ှာကျ ဂန်တဝငျအကဆြုံး ကငျမရာအဖွဈ သတျမှတျခံထားရပါတယျ။
ဒီ လှငျ့မြောနတေဲ့ အိပျရာကို ၂၀၀၆ ခုနှဈက ထုတျလုပျခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့အလနျးဆုံး အိပျရာဖွဈတာကတော့ သခြောပါတယျ။ ကွမျးပွငျက ၁.၃ ပအေမွငျ့မှာ လှငျ့မြောနပွေီး အလေးခြိနျ ပေါငျ ၂၀၀၀ ခံနိုငျပါတယျ။ ဒျေါလာ ၁.၆ သနျး တနျဖိုးရှိပါတယျ။
Wallis Simpson ပိုငျဆိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ စိနျနဲ့ ပွောငျခေါငျးစိမျး ရောထားတဲ့ ကြားသဈပုံလကျပါတျဟာ ၂၀၁၀ ခုနှဈ လနျဒနျလလေံပှဲတဈခုမှာ ဒျေါလာ ၁၂.၄ သနျး ရခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး လကျပါတျ ဖွဈပွီး ကကျြသရနေဲ့ အလှကလဲ တနျဖိုးနဲ့ ထပျတူညီပါတယျ။
၂၀၀၄ ခုနှဈက Garconala Pipe နာမညျရှိတဲ့ ပီကာဆိုရဲ့ ဈေးအကွီးဆုံး ပနျးခြီကားဟာ နယူးယောကျလလေံပှဲတဈခုမှာ ဒျေါလာ ၁၀၄.၂ သနျး ရခဲ့ပါတယျ။ ပီကာဆို ၂၄ နှဈအရှယျ ၁၉၀၅ ခုနှဈက ရေးဆှဲခဲ့တာပါ။
ပနျးခြီဆရာ Paul Cezanne ရဲ့ The Card Players ဆိုတဲ့ ပနျးခြီကားတဈခပျြဟာ ၂၀၁၁ ခုနှဈ လလေံပှဲတဈခုမှာ ဒျေါလာ ၂၅၀ သနျးမှ သနျး ၃၀၀ ကွား ရခဲ့ပါတယျ။ ဝယျတဲ့သူက ကာတာက တျောဝငျမြိုးရိုးဝငျ တဈဦးဖွဈပွီး Private Sale အနနေဲ့ ရောငျးခဲ့တာပါ။ ကမ်ဘာ့ တနျဖိုးအကွီးဆုံး ပနျးခြီကားတဈခပျြလို့ ဆိုကွပါတယျ။
ပွငျသဈရဲ့ ဒုတိယ ဈေးအကွီးဆုံးအိမျဟာ ဒျေါလာ ၅၀၆ သနျး တနျပါတယျ။ ဒီအပနျးဖွအေိမျကို ၁၉၂၉ မှ ၁၉၃၂ အတှငျး ဆောကျလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး တဈခါက Belgium ဘုရငျ ပိုငျစိုးခဲ့တဲ့ နယျမွမှော ဆောကျလုပျထားတာပါ။
၂၀၁၀ မှာ ရှားပါးတဲ့ ပနျးရောငျစိနျတဈပှငျ့ဟာ ဟောငျကောငျမှာ ဒျေါလာ ၂၃ သနျးနဲ့ အာရှမှာ ဈေးအကွီးဆုံး ရတနာအဖွဈ ရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။ ၁၄.၂၃ ကာရကျရှိတဲ့ The Perfect Pink အမညျရတဲ့ စိနျပှငျ့ဟာ ဒျေါလာ ၂၃၁၆၅၉၆၈ နဲ့ လူလေးယောကျ အပွိုငျအဆိုငျ လလေံဆှဲရငျး အမညျမသိသူတဈဦးထံ ပါသှားတာပါ။
ဒီ Chopard လကျပါတျနာရီမှာ အသညျးပုံ စိနျပှငျ့ သုံးခု ပါပါတယျ။ ပနျးရောငျက ၁၅ ကာရကျ၊ အပွာက ၁၂ ကာရကျ၊ အဖွူက ၁၁ ကာရကျ အသီးသီးရှိပွီး ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈမှာ ဒျေါလာ ၂၅ သနျးနဲ့ ရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။
Pink Star လို့ချေါတဲ့ ဆီးသီးအရှယျ စိနျဟာ ဂြီနီဗာလလေံပှဲတဈခုမှာ ဒျေါလာ ၈၃ သနျးနဲ့ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ကြောကျမကျြအဖွဈ စံခြိနျတငျ ရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ပနျးရောငျစိနျပှငျ့ကွီးဖွဈပွီး တောငျအာဖရိက ဒီဗီယာ မိုငျးတှငျးတှကေနေ ၁၉၉၉ မှာ ရရှိခဲ့တာပါ။
ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးအိမျဟာ အတ်တလနျတိတျ ကြှနျး Antillia ကို အစှဲပွုပွီး အမညျပေးထားတာပါ။ ဒီအိမျဟာ ၂၇ ထပျအိမျ ဖွဈပွီး Mumbai တောငျဘကျပိုငျးမှာ ရှိပါတယျ။ Reliance Industries ရဲ့ Chairman Mukesh Ambani ရဲ့ ကိုယျပိုငျအိမျဖွဈပွီး အိမျဝနျထမျး ၆၀၀ ရှိကာ အိန်ဒိယရဲ့ ဈေးအကွီးဆုံးအိမျအဖွဈ ဒျေါလာ သနျး ၂၀၀၀ နဲ့ စံခြိနျတငျထားပါတယျ။
Previous: သင် ဗိုက်နာရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၂ ချက်
Next: Facebook ပေါ်မှာ ချစ်သူစုံတွဲများအကြား သတိပြုရှောင်ရှားစရာများ